काठमाडौँ- भोलि तराई मधेशका जिल्लामा छठ पर्व मनाइंदैछ। तराई बासिन्दाहरुले छठलाई धुमधामका साथ मनाउने गर्छन्।
आइतबार देखि शुरु भैसकेको छठको मूख्य दिन मङ्गलबार मनाइंदैछ। अघिल्लो वर्षहरुमा सरकारले छठको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेकोमा यसपालि भने सार्वजनिक बिदाको विषयलाई लिएर सर्वसाधारणमा अन्योलको स्थिति शिर्जना भएको छ।
यस वर्ष समेत सरकारले छठको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भएता पनि देशैभर भने बिदा दिइएको छैन । नेपाल राजपत्रमा २०७४ चैत १४ गते प्रकाशित गरेको गृह मन्त्रालयको सूचनामा छठको सार्वजनिक बिदाबारे उल्लेख गरिएको थियो।
गृह मन्त्रालयको सूचनाको २.२ मा ‘सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्र सार्वजनिक बिदा हुने पर्वहरू’ भन्दै उल्लेख गरिएको छ। त्यस अन्तर्गत खण्डको (घ) मा ‘छठ पर्व, कात्तिक २७ गते मंगलबार’ पनि समावेश भएको हुँदा भोलि छठको दिन सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्र बिदा हुनेछ।
प्रकाशित : सोमबार, कार्तिक २६, २०७५१८:२५
विदेशमा रहेका नेपालीले पनि अब भोट हाल्न पाउने ! आयोगले शुरु गर्यो गृहकार्य !
निर्मला हत्या प्रकरण : बम दिदीबहिनी, एसपी विष्ट र मामा माथि अनुसन्धान भएकै छैन
हिमपातले एसइई तयारी कक्षा प्रभावित, विमानस्थल बन्द !
श्रीमानले बलात्कार गर्न खोजेको भन्दै प्रहरीकोमा पुगिन् श्रीमती ! श्रीमान पक्राउ !
आज राति १ बजे घरमा आगो लाग्दा जलेर राजुको मृत्यु ! आगलागीको कारण खुल्न सकेन !